RASMI: Toni Kroos Oo Heshiis Dheer U Kordhiyay Kooxdiisa Real Madrid
HomeWararka MaantaRASMI: Toni Kroos Oo Heshiis Dheer U Kordhiyay Kooxdiisa Real Madrid
12/10/2016 Samatar Mohamed
Kooxda Real Madrid ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqday inay heshiis kala gaadheen xiddiga khadka dhexe ee Jarmalka Toni Kroos, kaas oo qandaraas kordhin u sameeyay kooxdiisa isagoo Real Madrid ku sii negaan doona ilaa iyo 2022.
Toni Kroos ayaa qandaraaskiisii hore waxa uu dhici lahaa 2020, laakiin kooxda Los Blancos ayaa u arragtay xiddig muhiim u ah kooxda, waxaana ay ugu kordhiyeen 2 sannadood oo kale. Warbixin ay soo saartay Real Madrid ayaa lagu yidhi: “Real Madrid iyo Toni Kroos waxa ay ka heshiisyeen in qandaraaska loo kordhiyo, ciyaaryahanka oo sii joogi doona kooxda ilaa iyo 30-ka June 2022.
“Maalinta Khamiista 1:30pm (3:30 pm Saacada Geeska Afrika) ayuu Toni Kroos ka soo hor muuqan doonaa saxaafadda isagoo shir jaraa’id ku qabanaya Santiago Bernbeu”. Xiddiga Jarmalka oo qandaraaskiisii hore ka qaadanayey Real Madrid mushahar gaaraya 11 million euro sannadkii, ayaa haatan qandaraaskiisa cusub qaadan doonaa ku dhawaad laba jibaarka lacagtaas isagoo cashuurta ka hor qaadan doona 20 million euro xilli ciyaareedkii.
Wadar ahaan qandaraaska cusub ee Toni Kroos ee muddada 5-ta xilli ciyaareed waxaa ku bixi doona 120 million euro. Kroos ayaana noqday xiddiga ugu mushaharka baddan taariikhda Jarmalka. Waxa uu markii hore ka danbeeyay xiddiga Bayern Munich Thomas Müller (€15 million), laacibka Manchester United Bastian Schweinsteiger (€14 million) iyo Ilkay Gündogan oo Manchester City xilli ciyaareedkii ka qaata 12 million euro.
Kroos ayaa kaga soo biiray Real Madrid kooxda Bayern Munich xagaagii 2014 heshiis gaadhayey 30 million euro. Keliya laba xilli ciyaareed waxa uu u saftay 108-kulan, waxaana uu u dhaliyey 4-gool, waxa uu muddadaas ku guuleystay Champions League, Koob Adduun iyo 2 European Super Cup.